Thursday April 12, 2018 - 08:00:28 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanayo dhulka Jaziirada carabta ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay wadanka sucuudiga uu la kulmay ilaa 4 weerar oo kala duwan kuwaas oo loo adeegsday diyaarado aan duuliye lahayn iyo gantaalada ridada dheer Balastika loo yaqaan
Maleshiyaadka Xuthiyiinta Shiicada ah ee ay iiraan taageerto ayaa sheegtay inay kuweeraren diyaarado Drones ah Garoonka Diyaarada Abha oo kuyaala Gobolka Casiir iyo shirkada ugu weyn soo saarka Shidaalka sucuudiga ee Aramko, xarunteeda Gobolka Jaazan oo dhaca koofurta wadankasi.
Duqeynta diyaaradaha ayaan la sheegin khasaaraha ka dhashay balse garoonka diyaaradaha Abha ayaa shalay gelinkii danbe Hakiyey dhamaan duulimaadyadii kabaxayey iyo kuwii kasoo degayay intaba.
Sarkaal u hadlay Maamulka Aala Sucuud ayaa sheegay in ciidankoodu ay ku guuleysteen inay dhulka soo dhigaan laba diyaarad oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee meelaha fog laga hago, kuwaas oo isku dayey inay weeraran garonka Abha iyo Shirkada Aramko.
Saacado yar kadib ayay markale Maleshiyadka Xuthiyintu Saarukh nooca ridada dheer ah ku rideen Magaala Madaxda Sucuudiga ee Riyaad, iyagoona sheegtay inay weerareen Wazaarada Difaaca dowlada Sucuudiga.
Qaraxyada madaafic gaaraya ilaa 3 ayaa laga maqlay Hawada Sare ee Magaalada Riyaad, kuwaas lasheegay inay ahaayeen sawarikh looga hortagayey duqeymaha ay Xuthiyintu la damacsanaayeen xarunta wazarada difaacada Sucuudiga ee Magaalada Riyaad.
Duqeymahan is xiga ayaa imaanaya Maalin kadib markii uu Masuul ka tirsan Maleeshiyaatka Xuthiyiinta uu sheegay inay maalin walba wadanka Sucuudiga kuweerari doonaan Gantaalada Balastika ah, xarumahoodana ay la beegsan doonaan weeraro uusan carabaabin noocooda.
Maalin kahor ayay ahayd markii afar katirsan ciidamada Sucuudiga lagu dilay dagaal ay Maleeshiyada Xuuthiyiinta ah kula galeen xuduud-beenaadka ay wadaagaan wadamada Yemen iyo Sucuudiga.
Xuuthiyiinta wadanka Yemen oo ah Maleeshiyo shiico ah ayaa sanado badan waxaa ay taageero dhaqaale iyo mid militari ka heli jireen wadanka Sucuudiga si ay ula dagaalamaan Mujaahidiinta Al-Qaacidada Jaziirada Carabta, balse sanadihii dambe ayaa waxaa aad usoo xumaaday xiriirka ka dhexeeyay labada dhinac ee horey ugu shirkoobay ladagaalanka Mujaahidiinta, taas oo keentay in Xuuthiyiintu ay ku faraq-xirtaan dowlada iiraan oo ay isku caqiido yihiin, dagaalna kala horyimaadaan maamulka Sucuudiga.
Maleeshiyaatka Xuuthiyiinta ayaa qabsaday qaybo fara badan oo kamid ah Wadanka Yemen oo ay ku jiro Caasimada Sanca, waxaana tan iyo bishii Maarso ee 2015 wadankaas ka socda dagaal cir iyo dhul ah oo ay Xulafada Sucuudiga iyo imaaraadku ay hogaaminayaan aka wadaan wadana Yemen, kaas oo ay ka dhasheen dhibaatooyin baaxad leh oo soo gaaray dadka shacabka ah .
Amiirka Al Qaacidda Oo Weerar Dhanka Afka ah Ku Qaaday Dhaxal sugaha dowladda Sacuudiga.
Qaraxyo Khasaara dhaliyay oo ciidamo lagula eegtay Magaalooyinka Jowhar iyo Boosaaso.